Global Voices teny Malagasy » Singapaoro: Dokotera amin’ny biolojia, bilaogera, sady mpamily fiarakaretsaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Mey 2017 14:08 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika (fr) i Anna Gueye, imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Mediam-bahoaka, Sendikà, Siansa, Toekarena sy Fandraharahàna
Mpamily fiarakaretsaka any Singapaoro  izy [amin'ny teny anglisy toy ireo rohy rehetra voatanisa], bilaogera, ary manana maripahaizana avy ao amin'ny Oniversiten'i Stanford . Faritan'ireo mpampiasa aterineto ao Singapaoro ho ilay « mpamily fiarakaretsaka manampahaizana indrindra eran-tany izy ». Mingjie Cai no anarany.
Niasa nandritra ny 16 taona i Dr. Cai toy ny mpikaroka ambony tao amin'ny Ivontoeran'ny Biolojian'ny molekiola sy ny sela (IMCB)-n'ny ASTAR  , ao Singapaoro. Voaroaka tsy nisy onitra izy tamin'ny 2007. Tamin'ny volana novambra 2008, taorian'ny fikarohana tsy nahitàna vokany, dia nanapaka hevitra ny ho lasa mpamily fiarakaretsaka izy. Efa efa-bolana izy izao no nanomboka nitoraka nilaogy. Nanintona ny sain'ireo mpitoraka bilaogy ao Singapaoro sy ireo media ho an'ny olon-drehetra ny bilaoginy.
Toy izao ny fomba ampahafantaran'i Dr. Cai ny tenany ao amin'ny bilaoginy :
Angamba ny hany mba mpamily manerana izao tontolo izao manana maripahaizana avy ao Stanford sy tena manana todika siantifika marina , voatery nandao ny fikarohana aho teo amin'ny farantampon'ny asa ara-tsiansa nataoko, ary tsy afaka nahazo asa hafa noho ny antony izay ataoko hoe « singapaoreanina manokana ». Noho izany, am-pamiliana fiarakaretsaka aho ho an'ny fivelomako ary mitantara ny zavatra iainako mba hahatonga ity asa tokampizotra ity ho lasa mahaliana kokoa. Manantena aho fa hahaliana anareo ihany koe ireny tantara ireny.
Milaza ireo toe-javatra nanosika azy ho lasa mpamily fiarakaretsaka i Dr. Cai :
Tena mety ho ny nofy ratsy indrindra mety hahazo ny lehilahy tsotra iray ny lasa tsy manana anton'asa amin'ny taonako, raha tsy miresaka ny fahaverezan'ny asa aman-taonany fotsiny… Nandefa CV sy taratasy fangatahana maro manerana an'i Singapaoro aho, tao anatin'izany ny oniversite, ny sampandraharaham-panjakana sy ny orinasa tsy miankina. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsy namaly mihitsy. Tsy tanteraka ireo valinteny vitsivitsy mba azoko. Tato aoriana, namono ireo mba fanantenako farany mba hahita asa ny fipoahan'ny krizy ara-bola manerantany. Tamin'ny Novambra 2008, nandray ny fanapahankevitra ny ho lasa mpamily fiarakaretsaka aho nony farany.
Voalaza ato amin'ity bilaogy ity ny sasany tamin'ireo zava-nitranga niainako teo am-pamiliana ny fiarakaretsaka. Tena izy izy ireo ary tantaraina tsy hisy tomika araka ny azo atao … Ny tanjon'ity bilaogy ity dia ny hanomezana ireo mpamaky ny fijoroako vavolombelona mivantana amin'ny fiovana niainako : mpahay siansa ambony lasa mpamily fiarakaretsaka vao nanomboka ao anatin'ilay Singapaoro amin'izao fotoana izao.
Fa tena misy marina ve i Dr. Cai ? Tena mpahay siansa marina ve izany ? Nanadihady mikasika ny lalàna nodiavin'i Atoa Cai ny bilaogy Toward the Green (Mankany amin'ny maitso) ary manamarina fa nizara lahatsoratra siantifika maro ny Dr Cai.
Toa mazava loatra ny zava-misy : Tena misy i Dr. Cai, ary afaka soritana amin'ny fomba tsotra ny asa maha mpahay simia azy teo anelanelan'ny taona 1989 sy 2009. Tena misy porofo tokoa izay toa mampilaza fa nanana fifandirana tamin'ny IMCB izy tamin'ny 2007.
Noho izany, fa maninona no mandalo llan-tsarotra ny Dr. Cai amin'ny fitandiavana asa any aminà laboratoara Fikarohana sy Fampandrosoana? Tsy dia mandray mpiasa firy io sehatra io amin'izao fotoana izao. Ny vokatry ny olana ara-toekarena dia ny tsy fisian'ny orinasa maro hanakarama mpahay siansa matihanina. Tsy dia manampy firy ny diplaoma – efa elaela ihany izay fotoana nisianà mpikaroka be loatra sy ny tsy fisiana asa ho azy ireo izay. Tsy manampy izany ka maro ny olona mahatsapa fa miely any amin'ny sehatry ny Fikarohana sy Fampandrosoana ihany koa ny fanavakavahana. Mety efa any amin'ny efapolo taona any ho any i Dr. Cai, izay nahazo ny maripahaizany, taona sarotra indrindra hahitana asa, na inona na inona sehatra fahaizana.
Mitantara tsara ny traikefany amin'ny maha-mpamily fiarakaretsaka azy i Dr Cai. Na izany aza, ho an'ny olona toa ahy, mitarika ahy ny zavatra niainany mba hampitandrina na iza na iza mikasa ny hiasa ao amin'ny sehatry ny Fikarohana sy Fampandrosoana, tsy iresahana fotsiny ireo maniry ny mba hisian'izany any amin'ny A*STAR ao Singapaoro.
Mamaritra ny Dr. Cai ho toy ny « feon'ireo rehetra mpamily fiarakaretsaka rehetra ao Singapaoro»  ny Rambling Librarian (Mpitamboky mirediredy ):
… Mety veitivety izy dia tena lasa feon'ireo rehetra mpamily fiarakaretsaka ao Singapaoro. Mpitarika amin'ny fombany izy, na tsy nieritreritra ny ho lasa toy izany aza.
Gaga amin'ny fitondrantenan ‘ilay bilaogera-mpamily fiarakaretsaka i Alvinology II :
Vakiana toy ny tantara momba ny fiainana mpahay siansa iray lasa mpamily fiarakaretsaka ilay bilaogy, amin'ny fitantarana tsara ireo fandinihana hafahafa nataony tao anatin'ny tontolo andro – ireo mpandeha nihaona taminy, ny fiovan'ny fiarahamonintsika.
Na izany aza, mampalahelo ahy izy. Fandaniam-poana ny fotokarenan'ny olombelona rehefa tsy mifanaraka amin'ny asa ataon'ilay olona ny fahaizamanaony sy ny fepetra akademikany. Tena tsy tsara raha miparitaka ao Singapaoro ny fironana toy izany.
Mankafy  ny fomban'Andriamatoa Cai i “Mr Wang Says So” (Izanyu no ambaran'i M. Wang) :Tiako be ny fanoratany. Manao ny marina, mahay mihaino, marina ary tena maneho tsara ny tsiro ao an-toerana. Mahatonga ahy te-hanoratra boky poezia ny sorany.
Mieritreritra  kosa i Heyzanie's World (Ny tontolon'i Heyzania) fa tsy asa manambany ny mamily fiarakaretsaka, na ho an'olona manana maripahaizana ‘doctorat’ avy any Stanford aza:
Sehatra iray hahafahanao mahaleo tena izany ; raha voatantana tsara, tsy dia ratsy loatra ny fiainanao. Zava-dehibe kokoa, manome anao fampifanarahana sasany izay manome anao ny fahafahana hisahana ny lafiny hafa eo amin'ny fiainana. Rehefa dinihana moa izany, nandany ny fotoana niainany tamin'ny fanaovana fikarohana tany amin'ny laboratoaran'olon-kafa ny Dr. Cai. Hahatsara azy kokoa ny mamantatra sy manao fanandramana momba ny fiainany manokana, mba hiovana.
Raha amiko manokana, tsy mihevitra aho fa manambany ny mamily fiarakaretsaka – na ho anà mpikaroka malaza aza – raha toa ka hay ny manatsoaka ny zavatra tsara indrindra ao amin'izany.
Antenain’ i Kent Ridge Common ireo mpahay siansa fa ho afaka hiasa ao anaty tontolo iray ahafahan'ireo samy mahay indrindra mivelatra :
Mitovy amin'ny anà trondro navoaka avy ao anaty rano ny zavatra niainan'ny Dr. Cai, na ny marimarina kokoa, napetraka taminà tontolo iainana voamariky ny fanjakazakana manempotra, ny fitsaràna an-tendrony, sy ny fireharehana. Tena tsara ho an'ny firenena toy ny antsika ny fanofisan'ny olona sasany ho lasa mpikaroka malaza, fa voalohany indrindra mialoha ny zava-drehetra, mila manamboatra tontolo iray ahafahan'ireo tsara indrindra mivelatra isika. Raha mbola manempotra foana izany tontolo izany, tsy handingana ny sehatry ny nofy ireo nofy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/27/100269/
 Mpamily fiarakaretsaka any Singapaoro: http://taxidiary.blogspot.com/
 Oniversiten'i Stanford: http://fr.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
 ireo media ho an'ny olon-drehetra : http://www.straitstimes.com/Breaking%2BNews/Singapore/Story/STIStory_418626.html
 todika siantifika marina: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WSN-4C5PRXN-C1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7ca6da3acf1fac8f5477cd950914d27f
 toe-javatra : http://taxidiary.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
 Nanadihady : http://sgblogs.com/entry/mingjie/357853
 feon'ireo rehetra mpamily fiarakaretsaka rehetra ao Singapaoro»: http://ramblinglibrarian.blogspot.com/2009/08/leadership-ethics-and-online.html